वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : दीपावली र नयाँ वर्ष ११२८ को शुभकामना!
दीपावली र नयाँ वर्ष ११२८ को शुभकामना!
यहाँहरु सबैलाई नयाँ वर्ष ११२८ (नेपाल सम्वत) र दीपावलीको उपलक्षमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु!
नेपाल सम्वतका बारेमा यथेष्ट चर्चाहरु चलिसकेका छन् केहि वर्ष यताबाट र यसलाई राष्ट्रिय सम्वतका रुपमा प्रयोग गर्ने विषयलाई लिएर समर्थन र विरोधमा धेरै लेखी-बोलीसकिएका छन्। म यो सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतको रुपमा प्रचलनमा ल्याइनुपर्छ भन्ने धारणाको die hard समर्थक हुँ। राणाहरुले लहडका भरमा लादेको विक्रम सम्वतलाई टाउकोमा बोकेर हिँडिरहनुमा कुनै गौरव छैन। एउटा नेपाली नागरिकले अत्यन्त पुण्यको काम गरेर शुरु गरेको सम्वतलाई राष्ट्रले गौरवका साथ मान्यता दिनुपर्छ। नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतको रुपमा मान्यता दिनु भनेको, मेरो विचारमा, नेपालको साँस्कृतिक (र वास्तविक) एकीकरणको पहिलो पाइला चाल्नु हो। देशका सबै क्षेत्रका प्रमुख सांस्कृतिक मान्यताहरुलाई सम्मानजनक ढंगले 'राष्ट्रव्यापीकरण' गर्न सकियो भने अहिलेसम्म रहिरहेको 'विजेता' र 'विजित' अथवा 'शासक' र 'शासित' भनेर विभाजित मानसिकतालाई कम गर्न पनि धेरै सहयोग पुग्नेछ।
औपचारिक कामकाजमा आउने कठिनाईका कुराहरु हुनसक्छन्। मलाई के लाग्छ भने औपचारिक कामकाजको लागि हामीले इस्वी संवतलाई नचलाइ नहुने भईसकेको छ। वाँकी विश्व पूरै त्यसैमा चलिरहेकोले अहिले हामीले धेरै कठिनाइहरु भोगिरहनुपरेको छ। नेपालका प्रमाणपत्र बोकेर विदेश आएका हामीले आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेका तिथि-मिति विदेशीलाई बुझाउन र इस्वीमा लान गर्नुपरेको कसरत काफी छ त्यो अप्ठेरोको उदाहरणको लागि! चीनियाँहरु सरकारी र औपचारिक कामकाजमा इस्वी संवतलाई प्रयोग गर्छन् तर सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि भने आफ्नै पुरानो पात्रोको भर पर्छन्। उनीहरुको नयाँ वर्ष (spring festival) गज्जब भब्य हुन्छ। भारतमै पनि त्यस्तै हो। हामीले पनि त्यहि तरिका अपनाए हुन्छ, साँस्कृतिक रुपमा नेपाल सम्वत र औपचारिक-सरकारी कामकाजको लागि इस्वी सम्वत।
अन्त्यमा फेरि एकपटक, नयाँ वर्ष र तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!!!!
अनेसास-जापानको 'लक्ष्मी जयन्ती' मा पठाइएका रचनाहरु...
वीरेन्द्र साहप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली!